सात प्रदेशका सातै मुख्य मन्त्रीहरुको शैक्षिक योग्यता कति ?
काठमाडौं । देश सक्षम र विकासको बाटोमा लम्काउन नेतृत्व पनि उत्तिकै सक्षम हुनु पर्ने विद्हरु बताउँदै आइरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा यसको अभ्यास भएको पनि देखिन्छ । यसको अभ्यास नेपाली राजनीतिमा भने हुन बाँकी नै रहेको छ । कही कतै यसको अभ्यास भएको पाइन्छ भने कही पाइएको छैन ।
बजेटपछि बल्ल नयाँ मन्त्री बन्दै
काठमाडौँ । ‘आज हुन्छ कि भोलि’ भन्दै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे बजारमा निक्कै हल्ला चल्छ । तर, भित्री तयारी छ, बजेटपछिको ।
दलित परिवारलाई मन्त्री अर्यालले दिइन् झुल
स्याङ्जा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्याङ्जाका दलित परिवारलाई झुल वितरण गरेकी छिन् । मन्त्री अर्यालले वालिङ नगरपालिका २ स्थित छप्राकमा रहेका २०५ दलित परिवारलाई झुल वितरण गरेकी हुन् । त्यस्तै, उनले आज स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका–१ त्रियासीस्थित निर्माण गर्न लागिएको त्रियासी बौवा खानेपानी आयोजनाको उनले शिलान्यास गरेकी थिइन् ।
गृह जिल्ला पुगेर मन्त्रि अर्यालद्वारा खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास
स्याङ्जा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले गृह जिल्ला पुगेर खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गरेकी छिन् । स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका–१ त्रियासीस्थित निर्माण गर्न लागिएको त्रियासी बौवा खानेपानी आयोजनाको उनले शिलान्यास गरेकी हुन् । तस्वीरः हिमलाल पराजुली
अख्तियारलाई महिला मन्त्रीको चुनौती
काठमाडौँ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दुई पूर्वमन्त्रीहरुसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । बहुमूल्य जग्गा धेरै कबोल गर्नेलाई मुद्दा चल्दा पनि अझै सोही नाममा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । सो जग्गा अझै पनि फनपार्कले प्रयोग गरेर मासिक लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेको छ ।
मन्त्री ठोक्ने, राज्यमन्त्री रोक्ने !
काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनको ‘राप र ताप’ यस्तो कि सहसचिवलाई प्रदेशतिर खटाउने विषयमा ‘कुरा नमिल्दा’ मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच कटुता । अघिल्लो वर्ष त्यही मन्त्रालयमा गौरीशंकर चौधरी र राधिका तामाङबीच ‘पानी बाराबारको स्थिति’ थियो ।
सेनाको हेलिकप्टरबाट मन्त्री अधिकारीसहित सातै जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो
काठमाडौँ । ताप्लेजुङमा बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीसहित सातै जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ । आज मौसममा सुधार आएसँगै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट आज अपराह्न १ बजेर २५ मिनेटमा ती शव त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएको हो । शव छुट्टाछुट्टै शववाहनमा राखेर परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिने भएको छ ।